Surwaal lagu Soorakibay Ama Wata Keybourd Mouse iyo Sameecada Codka Cumputer-ka oo lasoo saaray (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Hadii aad dhibaato ku qabtey miiska inaad saarto ama hortaada ay yaalaan Keybourd iyo mous-ka loo adeegsado Kumbuyutarada, waxaa arintaasi kuu sahlaya oo kuu fudadayna surweelka aad gashan tahay oo ay ku rakiban yihiin dhamaan qalabkaasi iyo waliba sameecada codka ee lagu dhageysto codka waxa ka shidan Cumputer-ka.
Waxaase adeegaasi aad kaga bogan kartaa suweel Jeans ah oo la soo saaray oo ay ku rakiban yihiin dhamaan adeegyadaasi.
Sarwaal keyboard wata
Shirkad naqshadaha hindista oo laga leeyahay wadanka Natherland laguna magacaabo Nieuwe Heren ayaa soo bandhigay darsin jeans-kaasi oo ah mid gacan ku sameys ah, waxaana qaybta hore ee lugaha jeans-ka ku rakiban keyboard, mouse & speakers kuwaasi oo u shaqeyn qab wireless ama fiilo la’aan ah.
Surweelkan Jeans-ka ah oo lagu magacaabo Beauty and the Geek, ayaan aheyn mid aad u culus waxaase uu ka yara culeys yahay kan caadiga ah sida uu sheegeen Erik de Nijs & Tim Smit oo ka mid ah shirkada hindistey surweelkan iyagoo wareysi siiyey shabakada WebProNews.
Inaad adeegsato aalada ku rakiban surweelkan Jeans-ka ayaa ah ayaa wuxuu kuu saamaxayaa in aad kumbuyutarkaaga isticmaasho adigoon u dhameyn ama fadhin kuriga miiska ag-yaal.
Qiimaha uu ku kacayo surweelkan ayaa lagu qadaray $ 400 (Afar boqol oo doolar), waxaase ay sheegeen quburada hindistey surweelkan in aanay u hayn dhaqaalihii lagu soo saari jeans-kan balse ay sugayaan inay helaan maalgashi dhaqaale si suuqyada looga helo.